Maqaarka Saaxiibtinimada Degdega ah ee Qalalan Anti-UV Ragga Neefsashada Doomaha |
85% Polyester + 15% Spandex, Mashiinka lagu dhaqo;
2 Jeebabka Dhinacyada daruuriga u ah daruurigaaga, uma soo boodayaan si aad u sugto furayaashaada / taleefankaaga / gels, naqshadda jeebka ee aaminka ah ayaa ka badbaado badan in laga ilaaliyo waxyaabaha inay ku dhacaan xaalad kasta;
Dalbo cabir 1 hoos ah haddii aad doorbideysid isku-habeyn cadaadis, Xiritaanka Elastic;
Cadaadiska gaagaaban ee isboortiga ayaa laga sameeyay dhar jilicsan oo aad u fiican oo kor u qaadaya dhaqdhaqaaqa kala duwan ee leh raaxada ugu badan iyo miisaanka;
Naqshadaynta maqaarka saaxiibtinimo iyo waarta. Flatlock seams wuxuu ku daraa jilicsanaan iyo ilaalin la'aan maqaarka maqaarka iyo xanaaqa;
Raaxada ku habboon. Waraaqaha laastikada ah ee moodada ah suunka dhexda ayaa ah mid raaxo leh oo libiqsan, kabadhkan gaabiska ah ee cidhiidhiga ahi waxay yareyn karaan xanuunka murqaha waxayna kugu haynayaan qaab wanaagsan si aad u sii wadato jimicsiga, qabow qalajiso oo neefsato;
Gawaarida Gawaarida Cayaaraha ayaa maqaarkaaga ka ilaaliya qorraxda, qabow oo qalaji;
Gawaarida jimicsiga weyn ee orodka, tababarka, jimicsiga, baaskiil wadista iyo wixii la mid ah. Haddii aad rabto inaad la kulanto cadaadis dheeri ah oo maqaarka ah, fadlan dalbo 1 cabbir ka hooseeya sida caadiga ah ee la gashado.
Waxaan iibsaday mid kasta oo ka mid ah dabaashayaashayda dugsiga sare oo ka mid ah surwaalkan gaaban. Waxay ku habboon yihiin wax yar oo ka weyn sidii la filayay waxayna u muuqdaan inay xoogaa jiidayaan biyaha. Way ku fiican yihiin tababarka, laakiin laguguma talin tartan. Tayo fiican oo hadana ujeedo ujeedo, marka waxaan siiyay 5 xiddigood.
Hore: Xirmooyinka Dhinacyada Qaabdhismeedka Xiritaanka Elastic 29.5 lastic -45.3 ″ Ragga Qubayska Dharka
Xiga: Xilliga xagaaga ee qalajiska degdega ah ee 'Spandex / Nylon Ragga Dabaasha Dabaasha ee Xeebta
Neefsashada Sexy liner mesh dhididka dabaasha jir ...